Fandraisana anjara voalohany kanefa dia nahatafakatra azy tamin’ny ampahefa-dalanasahady rehefa nahazo fandresena 3 sy sahala 1 tao anatin’ny lalao 4 nataony. Mbola niampy fandresena miisa roa niezinezina ihany koa izany tao anatin’ny fifanintsanana hahazoana ny tapakila ahafahana mandray anjara amin’ny CAN 2021 rehefa avy nandresy 1 noho 0 ny ekipa etiopianina tetsy Mahamasina sy nanamontsana ny ekipam-pirenen’i Niger tao amin’ny taniny tamin’ny isa 6 noho 2 be izao. Tafiditra ao anatin’ireo ekipam-pirenena 3 tsara indrindra aty Afrika, noho izany ny Barea, noho ireo ezaka nampitolagaga vitany tamin’iny taon-dasa iny, raha ny filaharana nametrahan’ny kaonfederasionina afrikanina na ny CAF azy. Marihina moa fa ny tompondakan’i Afrika farany teo dia ny ekipam-pirenen’i Alzeria no nibata ny amboara ary ny tompondaka lefitra na ry zareo senegaley no faharoa raha toa ka isika malagasy kosa no fahatelo. Nihazakazaka, araka izany, ny fisandratan’ny ekipam-pirenena malagasy izay narary nandritry ny taona maro ary antenaina fa mbola ho betsaka ihany koa ireo zava-bita hampitolagaga ho tontosan’ny Barea amin’ity taona ity.